Waa kee halka ciyaaryahan ee Wargeyska Marca uu ku eedeeyey guuldarradii kooxda Real Madrid xalay ka soo gaartay Champions League? – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2020. Kooxda Real Madrid ayaa guuldarro 2-3 ah kala kulantay Shakhtar Donetsk kulankoodii furitaanka Koobka horyaallada Yurub ee Champions League, laakiin Wargeyska Marca ka soo baxa dalka Spain ayaa hal ciyaarayahan kaliya dusha u saaray masuuliyadda guuldarradaas.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda caasimadda dalka Spain ayaa Marcelo ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanka iska lahaa masuuliyadda guuldarradii xalay soo gaartay Los Blancos, waxaana ay xitaa xiddiga reer Brazil ka hoos mariyeen tababare Zidane oo xalay wax badan qalday.
Marcelo ayuu Wargeysku qiimeeyey inuu ka soo muuqday booska 15-aad ee dhammaan 15-kii shaqsi ee Real Madrid kaga qeyb galay kulankan ay guuldarrada kala kulmeen kooxda reer Ukraine, waxaana ay hal boos ka hoos mariyeen macallin Zinedine Zidane.
Kooxda ka dhisan caasimadda Spain waa guuldarradeedii labaad oo xiriir ah oo ay xalay la kulmeen kaddib markii maalmo yar ka hor ay guuldarro kale oo kedis ah kala kulmeen kooxda Cadiz.
Real Madrid ayaa ugu cad-cadeyd guusha kulankan, maadaama kooxda reer Ukraine ay 10 ciyaaryahan oo kooxda koowaad ahiay kaga maqnaayeen Korona Fayras, laakiin Los Blancos ayaa qeybtii hore lagu hoggaamiyey 3-0.
Wargeyska Marca ayaa weerar toos ah ku qaaday xiddiga reer Brazil ee Marcelo, iyagoo tilmaamay inaan xiddiga reer Brazil looga fadhin inuu kubadda difaacdo, iyagoo tilmaamay in macallin Zidane ay tahay inuu ciyaarsiiyo kaliya kulammada Copa del Rey.
Wax laga xumaado ayuu Wargeysku ku tilmaamay in daafaca reer Brazil uu si weyn hoos uga dhacay heerkii uu markii hore joogay.
Kaddib markii Sergio Reguilon laga iibiyey kooxda Tottenham, haatan Marcelo ayaa booska daafaca garabka bidix waxa uu kula tartamayaa Ferland Mendy.